Creatinine - imwe pfuma secreted zvose Muviri rinobatanidzwa simba muviri. Creatinine anogadzirwa tsandanyama rinenge uye ndokusunungurwa kupinda ropa. kugutsikana Its anokonzerwa Vhoriyamu kwetsandanyama, saka mwero creatinine muropa riri kudzika vakadzi pane varume, nokuti munhukadzi koshesa mafuta gobvu pane tsandanyama.
Huwandu creatinine ari plasma anogona siyana zvinoshamisa nokuti kuti kwetsandanyama inovakwa zvishoma nezvishoma.
Avhareji yevanhu creatinine neropa vakadzi 43-81 mmol / l. Miganhu yacho creatinine tigutsikane nevanhu: 63-107 .mu.mol / L; mu vacheche 0-12 mwedzi - 46-104 mmol / L; muvana kubvira gore rimwe makore 15 - 24-62 mmol / l.
Kwakakwidziridzwa creatinine kungava vanhu kudya mafuta mhuka nemapurotini. Kana zvakadaro, ipapo pachava wakawedzera creatinine, weti uye ropa panguva imwe chete.
Creatinine anogona simuka unopinza kuwedzera kurovedza muviri, zvikuru tsandanyama kukuvara, kupera muviri, renal kukundikana, nemwaranzi kurwara, uyewo toxicity muviri pamwe nemishonga, barbiturates uye zvimwe zvinodhaka chepfu migumisiro.
Ungaderedza creatinine uve trimesters maviri pamuviri rokutanga, zvikuru muchitsanya ane simba uremu, muviri chete chirimwa anotsanangura zvokudya, chirwere chinonzi muscular dystrophy, panguva kurapwa pamwe nemimwe mishonga.
Creatinine rinobva weti pedyo neitsvo. Kana kugutsikana asingadi kusangana mitemo vanogona vanofungidzirwa renal chirwere. In chenjera renal kukundikana, yakakwirira creatinine, pyelonephritis, uye nguva dzose, uye ayo pamwero kuramba nokukurumidza kukura.
Creatinine mu weti
Norm: Men - 8,7-17,6 mmol; Vakadzi: 7,2-15,8 mmol.
The weti creatinine zvose kuva goho, anenge maviri magiramu kwemaawa 24. Ndozvakajairwa mu serum creatinine vakadzi nevarume ari zvakarurama chakarurama ichienzaniswa mitemo yawo tigutsikane iri weti.
Kana uchifanira aedzwe kuti creatinine kugutsikana?
- nokuti ongororo vanotumirwa kune vanhu vanopfuura kuongorora nokuda nokufungirana pamusoro nephrology nechirwere kana vane matambudziko itsvo;
- munguva kuongorora itsvo yevanhu kuzozvidzorerwa;
- kurapwa mishonga, izvo zvine chepfu migumisiro iri neitsvo.
Analysis nokuti creatinine
Ndozvakajairwa mune serum creatinine vakadzi nevarume akatsunga kushandisa Rehberg bvunzo, Kunobatsirawo iwe kuziva panguva weti. Usati zvakaitika nemiedzo izvi, zvinokosha kumbomira mabiko mishonga yakadai cortisol, thyroxine, corticotropin ose. Preparation nokuti kuongorora ndiko kusiya puroteni zvokudya kwemaawa 10 asati ropa kuzozvidzorerwa.
The Ongororo inotanga murwere kunwa yemafuta mvura uye zvakarurama vanyatsoona nguva weti. Zvadaro, hafu yeawa Kwapera vataipa ropa kubva tsinga, kunyange pashure maminitsi 30 kuenda urinalysis. Kuti zvaiita kupfuura nderechokwadi, uyewo anofunga pachavo mashoko: zera, urefu, uremu, murwere mararamiro.
Kana creatinine pamwero rakakwirira, chokutanga unofanira kushanyira chiremba-nephrologist.
Chii angina? Types uye zviratidzo angina
Toe itches: zvichibvira zvinokonzera uye unhu kurapwa
Phimosis of mwana, sei kubatwa?
Cryodestruction tonsils: tsanangudzo nzira, zviratidzo uye contraindications
Chitsitsinho chaitika: kurapwa madhiragi kumba
Dream dudziro: The siketi iri refu, pfupi, itsva, chena, dema, tsvuku
How kukura petunia: mazano nokuda beginners
Chii mutengo uye chii chinobatanidzwa kwaro sezvamunoita?
"Balzac Age" - ndiwo zvakadini?
Kero All "Letual" muzvitoro muSt Petersburg uye basa purogiramu
Mirror muimba yekugezera: nzira yekusarudza yakarurama
Ndiani akazogadzira arufabheti mutauro wokuRussia? arufabheti yeRussia sei?
Pharmacy zvigadzirwa nokuti chiso
Hotels in Switzerland - yechando inotonhora uye tsamwa
Makonye pamusoro madomasi mu greenhouses: sei kurwa? Panzira dzinobudirira kurapwa uye nzira
Flower Decembrist: kuchengetwa uye kugadzira
The mushonga yakaoma chikosoro mune vakuru nevana?